कथाः जागे रहो .....! Kasthamandap Daily
नठूला न साना जनता न नेता सबैलाई कोरोना देखिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । शायद जीवन र जगतको चक्रमा मानिस घुमिरहन्छ । गीता ज्ञानले पनि यही भन्छ । मानव एक चेतनशिल प्राणी हो तर उ सर्वोश्रेष्ठ चाहि होइन् । सुख दुःख आशा निराशा सिकाई छुटाई यो त चलिरहन्छ । बस् सदैव उ जागीरहनु र जगाइ रहनु पर्छ ।
जब म नौ कक्षामा पढदैथिर्एँ तब देशमा बहुदलको लागी आन्दोलन चलिरहेकोे थियो । कुरा हो २०४६ सालको हो, त्यतिबेला हाम्रो घरमा एउटा मर्फि रेडियो थियो । त्यो रेडियोवाट म बिबिसी । अलईण्डिया नेपाली सेवा, सिलोन आकाशवाणीका कार्यक्रम बढी सुन्ने गर्थे । कहिले काहीँ पोस्ट कार्डमा आफुलाई मन परेको फर्माइस गीत सुन्नका लागी हुलाकबाट पठाउने गथिए । एकपटक स्व. नारायण गोपालको ‘आँखाछोपी नरौं भने..’ भन्ने गीतमा मेरो नाम रेडियोवाट आयो । म यति खुशी भएकी त्यसको सिमा नै छैन । अनि गाउँमा साथि भाईलाई सुनाउदै हिडेँ कि ! आज अलईन्डिया रेडियो से मोहार नाम आएलस् भन्दै । तै बराभारी बन्ल्या का ? रे ! बभना (बाहुन) भनेर भन्थे जवाना यस्तो थियो करीब ३ महिना लाग्दथियो । रेडियोबाट नाम आउन । रेडियो नेपालमा पनि कति पठाई कति तर नाम कहिले सुनिन । स्कुलका साथीले कहिले काहि ‘ऐ बाजे आज तेरो रेडियो बाट नाम आ’ थियो’ भन्द थिए । मैले’ हो र भन्थेँ । अनि गोली मिठाई ख्वा भन्दथे र खुवाई दिन्थेँ मैले पनि । मेरो खल्तिमा ५–६ रुपैया कहिले पनि खाली हुदैन थियो । किनकि हाम्रो सानो पसल थियो त्यताबाट आमालाई थाहै नदिइकन झ्याप पार्थे । अरु साथि भन्दा म स्कुलमा धनी थिए । त्यति याद छैन साथीभाइको मोहरले मैले खाजा खाको । साँझ समाचार सबै जान सुन्दथियौं । सरहरुले पनि ‘रेडियो सुन्नु ज्ञान वढ्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । राति करिब १२ बजेसम्म म रेडियो खासगरि आकाशवाणी सुन्दै पढ्ने गर्दे । मेलोडि गीतहरु आशाका रफिका ‘आज पनि नेपाली कांग्रेसका तत्वहरुले सहरमा आन्दोलन टोडफोड गरे । प्रहरीले गोलि चलायो यतिजना घाईते भए उति जनालाई हिरासतमा लिएको छ भनेर एकदम गालि गर्थे रेडियो नेपालले । श्री ५ महाराजाधिराजले यो गरिबक्सियो भनेर सुनाउ थियो । कांग्रेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तत्व नाम राखेका थिए । पंचायतका शासकहरुले भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । खुब दोहरी अलईण्डिया रेडियो र रेडियो नेपालको चल्थ्यो । खासगरी पारवाहन सन्धिका विषयमा । रेडियो नेपालले पारवाहन सन्धिको वकालत गर्ने अलइन्डिया रेडियोले आन्दोलनको समर्थन गर्ने कि ‘नेपाल मे लोकतन्त्रवादीको मार डाला सूत्रोका कहना हे कि हजारौं आन्दोलनकारी कि ...।’ गाउँमा एक जना पंचायतका कार्यकर्ता थिए । उनीलाई हामी मामा भन्थ्यौं । उनी ‘भारतले नेपाल खानका लागि आन्दोलन देशमा गराएको हो’ भनेर कसैलाई पनि , बिरोध गर्न दिदैन थिए । मलाई त्यो कुराको खासै मतलब हुदैन थियो । शायद हाम्रो बुबा कांगेस हुनुहुन्थ्यो ्र किन कि एकजना काका आउनु हुन्थ्यो घरमा्र त वहा र बुबा कहिले काहि हाम्रो छिमिकी गाऊ नजिक एउटा ठुलो कोठारमा कहाँ जानु हुन्थ्यो साईकल चलाएर्र त्यति बेला वाटाहरु सबै धुलो उड्ने थिइ ्र हामी पनि स्कुल बाट आउदा धुलो उडाएर आउथियौं ्र खुब रमाइलो लाग्द थियो मानौं कुहिरो लागि रहेछ त्यस माथि हामी उडिरहेका छौं ्र एक दि ‘बैनी आज बाचेर आइयो’ भन्नुभो आमालाई ति काकाले ्र त्यो दिन त्यहा राजधानी वाट ठुला नेता आएका रहेछन् कोठारमा ्र बुबा र काकाले सिआइडि लागेको था पाउनु भए छ विचै बाटोमा र पछि बहुदल आउदाको नजिक नजिक सत्ताधारीले थाहा पाएछन् र ति काकालाई समाते छ्र काकाको पनि सानो घुम्ति पसल थियो बजारमा्र त्याहा बाट प्रजातन्त्रको संचार गर्नु हुन्थ्यो्र हामीले पनि आन्दोलन गरेका थियौं चैत्रेहुरिआ’को दिन्र पुलिसले लखेट्यौं हामी कालिमन्दिरको वाटो भागा बाग ्र ‘धभ धबलत मझयअचबअथ’ भन्दै नारा शायद लगायौं्र यो दोश्रो हाम्रो स्कुलवाट निस्केको विधार्थी ठूलो आन्दोलन थियो ्र पहिलो पहेलो र निलोको भोट परेको सालमा भएको थियो रे ्र हाम्रो दिदीहरुले सुनाउनु हुन्थ्यो कहिले काँहि तारा भएको लुगा लगाउनेहरुल आउथे रे अनि सबैलाई ‘बहुदल जिन्दावाद’ भन्न लगाउथे रे ्र हेड मास्टर प्रशासनका भक्त थिए ्र साझ घरमा आउदा त बुबाले झन्डै पिटनु भा’ को ्र हेड मास्टरले बुबालाई बजार मै भेटेर ‘तपाईको छोरो नेता बन्दै छ पुलिस कचहरिको फन्दामा परे भोलि नराम्रो होला गुरु यो पढने उमेर हो’ भने सुनाई सकेका रै छन् तब बुबाको रिसमा परियो ्र यसरी तारा तिर मन गयो ्रपछि बहुदल आयो मलाई सदस्य बनाए्र त्याँहा देखि मैले एकजना रेग्मी दाईलाई चिनेँ ्र अहिले उनी कोरोना धेरै भा को देश तिर छन् ्र उनी र म भएर ताराको परिचय दिदै हिडेयौं स्कुले युवामाझ ्र साइकल साइकल कच्चिबाटो ्र राजनीति ज्ञान र सिप सिकाउदै ्र शायद दुइ चार पटक ती दाई हाम्रो घर बसेको र सुतेका छन् ्र मीठो बोलि हसिलो मुहार अझै झल्लझलि आँखामा छ ्र घरमा राजनीतिक गफ गर्दैन थिए ्र पारिवारिक गफ गर्थे ्र आमाले बनाएको रोटी र प्याजको अचार खुप मनपराउदथे उनी्र ह आकाश भाई, कुरै पिच्छे जति खेर पनि भन्ने गर्थे ्र कहा कहा पुग्दैन थियौ हामी खुट्टाले र आँखाले भ्याए सम्म ्र भोक प्यास भन्दैन् थियौ ्र प्रायः शुक्रवार शुक्रबार हाम्रो यात्रा तारा फिजाउनका लागी हुन्थ्यो ्र महिनाको एक पटक सदरमुकाम बैठकमा जानु पर्ने ्र साईकल साइकल जान्थे म ्र भारतको नाकावन्दी र आन्दोलनका कारण भारतिय सिमाना जोडेका गाउघरमा राती लुटपाट खुब चलेको थियो ्र डाका लाग्द थियो भन्ने गर्द थिए ्र त्यसैले बजारमा व्यापारीहरुले गल्ला खरिद कम गर्थे ्र रात भरि जागा बस्नु पर्ने चौकीदारी गर्नु पर्ने ्र गाउको मामाको भरुवा वन्दुक थियो्र हामीपनि भाला, हँसिया र कटाहा बासको मोटो लठ्ठी लिएर राती जागा बस्दथियौं । छिममेकी काकाले कहिलेकाही भुतको कथा थारु भाषामा सुनाउथे र चण्डिको मन्त्र जपेर ‘लौ लड्को अब भुत्वा नै लागि’ (थारु भाषा) मा भनेर कौराको खरानी हाम्रा निधारमा लगाई दिन्थे । तब ढुक्क, मजा र डर तिनै हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ तरान छोड्काले ‘हे रो वावु बाबा हन लिह कतर्नियाघाट लि ह जाएर बेर तु अटरा मोट र हो’ भन्दै हातले नापो देखाउँथे । ‘कतरा’ भन्थि म । ‘बरा छो.. ट , बरा छोट का हु’ (थारु भाषमा) भनेर आफ्नो अड्कल देखाउदथे । ‘रै त काका बरस त बताउ कौन साल हो’ भनेर सोध्दथिए ‘का जन हो उ साल रजवाक् घर आग परल रह’ । तब ‘रे बेलभेस्वा तीस साल कोन’ भनेर मामा चर्को स्वरमा भन्थे । ‘लै रे लडको उठो एक फ्यारा पुल पुगन्ना हो’ ती मामाले निर्देशन दिन्थे । सबै जना ‘जागा रहो’ (हिन्दी भाषा)मा भन्दै कौरास (परालको आगो बालेको ठाउँ) बाट उठेर अगाडि जान्न्थ्यौँ । कसैसैले मकैको घोगा लिएर आउथेँ, र कौरामा राखि दिन्थे । ‘गजबके लावा फुटल (थारु भाष) मा भन्दै खरानीसंगै खान्थे । म पनि उनिहरुलाई साथ दिन्थे । भुटन होइन खान डर, त्रास र खुशी त्रिभुज बनेको हुन्थ्यो दिन दिनै । खासगरि राती खल्यानको पराल राति स्वाहा हुन्ग्थौं । प्रायः हाम्रो घर अगाडि बदालपुरेको खल्यानमा हामी बस्दथियौं । जब रातिको २ बज्थ्यो तब हाइ–हाइ लाग्दथियो । महिना जाडोको थियो, बहुदल व्यवस्था नआउन्जेलसम्म ‘जागा हो ! जागा हो ! भन्ने छुटेन । यो क्रम आज पनि जारिनै छ जागा हो जागा हो ! कोरोना से जागा हो ।
(यस कथामा अधिकाँश थारु भाषाको प्रयोग गरिएको छ)